Nohavaozina ny sarintany miaraka amin'ny soso-kevitra momba ny toerana vaovao hitsidihana | Androidsis
Manuel Ramirez | | apk, Fampiharana Android, About us
Roa herinandro lasa izay dia naneho hevitra izahay ny zava-baovao an'ny HERE Maps mifandraika amin'ny làlan'ny bisikileta ary toy ny tamin'ny beta nanentana ny mpampiasa hampakatra ny làlan'ny bisikileta mba hahafantaran'ny hafa azy ireo ary handehanana tsara. Tsy eto ihany ny fahazoana ny bateria amin'io heviny io ary bebe kokoa amin'ireo daty ireo izay mandrisika betsaka handray bisikileta, fa ny Maps, avy amin'ny Google, dia mahazo antsipirihany hafa momba an'io raha io no mitranga amin'ny kinova 9.26.1.
Roa volana lasa izay Tsy miresaka fanavaozana mahaliana ho an'ny Google Maps akory izany. Amin'ity indray mitoraka ity raha milalao amin'ny kinova 9.26.1 izay tonga miaraka amin'ny antsipiriany tsara ianao ary rehefa mitranga amin'ny tranga hafa dia misy miafina tsara izay hasongadinay. Tokony holazaiko fa fiovana ireo izay mety tsy hitanao tamin'ny voalohany, fa hahafahantsika miditra fampandrenesana amin'ny toerana vaovao sy malaza, fanovana ny maody mitondra fiara FAB ary ny safidy izao hampiasain'ny tsirairay amin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny zotra nofidinay.
1 Mikaroha amin'ny bisikileta na amin'ny tongotra
2 Ny FAB amin'ny maody mitondra fiara
3 Filazana ho an'ny toerana vaovao sy malaza
Mikaroha amin'ny bisikileta na amin'ny tongotra
Raha matetika ianao no mampiasa fitetezana rehefa ao anaty fiara ianao, dia azo antoka fa tsy fantatrao izany fikarohana izany ary napetraka ny fomba fiasa tamin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona ihany tamin'ny alàlan'ny maody mitondra fiara. Nesorina ity endri-javatra ity ho an'ny safidy bisikileta sy fitsangantsanganana.
Fa farany, amin'ny kinova vaovao, 9.26.1, dia manitsy an'io exclusivité io ary mampita izany amin'ireo fomba fitaterana telo. Ity fomba azonao ampiasaina ny fikarohana hahitana trano fisakafoanana, fivarotana sy karazana fananganana hafa amin'ny zotra izay naorinao tao amin'ny Google Maps.
Ny FAB amin'ny maody mitondra fiara
Tamin'ny volana Janoary dia nanana endrika vaovao izahay ary ity no maody mitondra fiara raha te hanana endri-pitaterana sasantsasany, saingy tsy mila misafidy toerana haleha.
Ao amin'ny kinova taloha dia hita tsara ny bokotra fikarohana FAB, saingy tsy nasongadina izy io satria ao amin'ny 9.26.1 izao. Raha tokony miafina ao ambadiky ny bokotra fikarohana, manana ny toerana tsy manam-paharoa sy maharitra afaka mandefa baiko am-peo tsy misy olana lehibe.
Raha tsy hitanao izany amin'ny voalohany rehefa miditra amin'ny maody mitondra fiara ianao, miseho aloka mandra-pikitikao ny toerana rehetra eo amin'ny sari-tany.
Filazana ho an'ny toerana vaovao sy malaza
Marina izany iray amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ity kinova vaovao ity ny Sarintany sy izay mifanaraka amin'ireo fanavaozana tonga, satria isam-bolana dia mampiditra sehatra vaovao i Google.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia miankina amin'ny safidy ny handray fanavaozana amin'ny tranokala vaovao sy malaza izay akaiky ny toerana misy antsika. Hiseho amin'ny fampandrenesana ireo orinasa vaovao toa ny manintona, na tranokala hafa efa tena tsidihina. Ity dia mavitrika amin'ny alàlan'ny tsindry ary mety ho kilemaina amin'ny Fikirana> Fampandrenesana.
Safidy lehibe hahafantarana toerana ao amin'ny faritra misy anao fandraisana lehibe ataon'ny besinimaro Ary ny Google Maps dia hanome antoka fa fantatrao izany, alohan'ny hilazan'ny namana aminao izany.
Ny sisa amin'ny vaovao dia antsipiriany bebe kokoa toy ny hitsin-dàlana mankany amin'ny fikirana Ok Google izay nampiana teo amin'ny efijery fanovana fitetezana, na ny safidy hanovana ny kisary amin'ny tranokalanao mba ho mora kokoa ny mamantatra azy eo amin'ireo safidy isan-karazany mety anananao.
Mikasika ny vaovao manaraka, avy amin'ny APK dia misy tsipika kaody vaovao milaza fa mety hisy izany download adiresy amin'ny faritra sasany izay fantatra mialoha fa ratsy ny fifandraisana Internet. Izay hahazo ny Sarintany hanoro hevitra antsika mba hampidina azy ireo mialoha alohan'ny handehanana any amin'izay haleha.
Sintomy ny APK an'ny Google Maps kinova 9.26.1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Google Maps dia havaozina amin'ny fikarohana amin'ny bisikileta / zotra mandeha, FAB vaovao ary maro hafa
Asus Zenpad Z8 misy efijery 8-inch ary fivoahana Snapdragon 650